अभिताभ र जया बच्चन अर्बपति, कति हाेला बच्चन परिवारको कुल सम्पत्ति ? – Nepal Journal
अभिताभ र जया बच्चन अर्बपति, कति हाेला बच्चन परिवारको कुल सम्पत्ति ?
Posted By: Nepal Journal March 11, 2018 | २७ फाल्गुन २०७४, आईतवार १२:४३
बलीउडका महानायक अमिताभ बच्चन र उनकी पत्नी जया वच्चनसँग १६ अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको छ । जया बच्चनद्धारा फाइलिंग गरिएको नामांकन पत्रमा यस कुराको खुलासा भएको हो । शुक्रबार जया बच्चनले राज्यसभाका लागि समाजवादी पार्टीका तर्फबाट पर्चा भरेकी छिन् । जसमा उनीहरुको सम्पत्तिको कुल विवरण दिइएको छ ।
शपथपत्रका अनुसार अमिताभ बच्चन र जया बच्चनसँग १६ अर्ब २० करोड बराबरको चल अचल सम्पत्ति रहेको छ । शपथपत्रमा वच्चन परिवारद्धारा लिइएको ऋणका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
जया वच्चनसँग ३ अर्ब २० करोड सम्पत्ति रहेको छ भने अमिताभ बच्चनसँग १२ अर्ब ८० करोड बराबरको सम्पत्ति रहेको छ । यि दम्पत्तिको नाममा लण्डन, दुबई र पेरिसमा बैंक खाता रहेको छ । देश विदेशमा गरेर बच्चन परिवारको कुल १९ बैंक खाता रहको छ ।
पछिल्लो ६ बर्षमा नै बच्चन परिवारको कुल समपत्ति दोब्बर भएको हो । अमिताभ बच्चनको १५ वटा बैंक खातामा ७५ करोडभन्दा बढी फिक्स डिपोजिट र पैसा जम्मा रहेको छ । उता जयाको नाममा ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको ज्वेलरी रहेको छ । उनीहरु १३ वटा गाडीका मालिक रहेका छन् ।
Be the first to comment on "अभिताभ र जया बच्चन अर्बपति, कति हाेला बच्चन परिवारको कुल सम्पत्ति ?"